Ukwehla kwezibalo zabaphila neNgculazi kuletha ithemba | News24
Ukwehla kwezibalo zabaphila neNgculazi kuletha ithemba
Isithombe: SithunyelweUNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu. Mthandeni Dlungwana uthe ukwehla kwezibala zabantu abahlolwe batholakala ukuthi baphila neNgculazi esifundeni iLembe kushiya inhlansi yethemba.
UNGQONGQOSHE wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu. Mthandeni Dlungwana uthe ukwehla kwezibalo zabantu abahlolwe batholakala ukuthi baphila neNgculazi esifundeni iLembe kushiya inhlansi yethemba.
UMnu. Dlungwana ubekhuluma emcimbini wokugujwa kosuku lwe-World Aids Day ehholo lo mphakathi eSibusisiwe, eMandeni, ngoLwesine oledlule, ngomhla ka-1 kuZibandlela (December).
Uthe nakuba lesi sifunda iLembe sibonakala singesinye salezo ezihamba phambili ngokuhaqeka kwabantu yilolu bhubhane lwesifo kushiya inhlansi yethemba ukuthi izibalo zamanje zehlile uma ziqhathaniswa neminyaka edlule njengoba ngonyaka ka-2012/2013 abantu abebenesifo seNgculaza babengu-15.5% kwathi ngo-2013/2014 baba ngu-13.5% nokuthe ngo-2013/2014 baphinda futhi baba ngu-13.5% kanti ngonyaka ka-2015/2016 baba ngu-12%.
Uthe: “Ngokwezibalo zoMnyango wezeMpilo kulesi sifunda, lesi sifunda salapha iLembe sinabantu abangu-17013 abahlolwe kwatholakala ukuthi banesifo seNgculaza kwabangu-144066 ebebehlolile ngonyaka ka-2015 kanye nalo esikuwo u-2016. Lokhu kusho ukuthi lesi sifunda simi ku-12% wesibalo sabantu abahaqwe yilesi sifo,” kusho yena.
Uqhube wathi Lesi isimo asisihle neze njengoba sisho ukuthi isifunda iLembe kanye nesaseKing Cetshwayo zimi endaweni isibili ngokuba nezibalo eziphezulu zabantu abahaqwe yisifo seNgculaza ngemuva kweTheku okuyilo elihamba phambili ngo-13%.
Uthe iminyango ehlukene kaHulumeni isebenza ngokukhulu ukuzikhandla ukuqinisekisa ukuthi kuqhanyukwa nezinhlelo kanye nemikhankaso ezovikela abantu abasha ukuthi bangazitholi sebengena ezinkingeni okungafanele ukuthi ngabe bangena kuzo. Uthe kule mikhankaso nezinhlelo uHulumeni usebenzisana nezinhlaka eziningi okubalwa kuzona amaphoyisa ophiko lweSouth African Police Services (SAPS), SANCA, Child Line, Thuthuzela Care Centre kanye nezinye izinhlangano ezingenzi inzuzo. Uthe iminyango eseqhulwini kule mikhankaso ngowezeMfundo, owezeMpilo kanye nowezokuThuthukiswa koMphakathi.
Uqhube wathi ukusebenzisana phakathi kweminyango kaHulumeni kanye neThuthuzela Care Centre ezinze ngaphakathi esibhedlela saseStanger kunezithelo ezinhle kakhulu ikakhulukazi kubantu abayizisulu zokudlwengulwa.
Uthe uHulumeni ukuqonda kahle kamhlophe ukuthi abantu baphila emiphakathini ngezinye izikhathi ebuye ibhekane nezinselelo ezahlukene. Uthe kulezi zinselelo kungabalwa ukusetshenziswa kwezidakamizwa intsha, ubugebengu, ukuyeka kwezingane zesikole ukufunda, ububha kanye nokusabalala kwemindeni eholwa izingane.
Uthe: “Iningi lalezi zinkinga linomthelela omkhulu ekubhebhethekeni kwesifo seNgculaza. Kungalesi sizathu noMnyango wezeMfundo enginguMphathiswa wawo wenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi kuba khona izinhlelo zokuzama ukubuyisela endleleni intsha esuke isesezikoleni kodwa ebonakala iziphethe ngendlela engeyinhle nokucacayo ukuthi ingaholela ezimweni ezimbi. Uphiko lwakwa-Special Needs Education Services (SNAS) eMnyangweni ngaphansi kohlelo i-My Life My Future selwenze umsebenzi omkhulu ukuzama ukuhlumelelisa izimilo zabafundi abaphuma esandleni,” kusho uNgqongqoshe.
Uthe yize uMnyango wezeMfundo ungakugqugquzeli ukukhulelwa kwezingane zesikole kodwa kumanje ususungule izinhlelo ngokusebenzisana nosonhlalakahle zokuqinisekisa ukuthi abafundi abakhulelwe bayalulekwa ngendlela efanele nokuzobasiza ukuthi bagweme amaphutha abangawenza ngesikhathi sokukhulelwa kwabo njengoba iningi labo besebancane ngokweminyaka.
Uthe: “Kungiphatha kabi ukuthi sinesibalo esingu-780 sabafundi abakhulelwe ngonyaka owedlule yize abangu-771 bekwazile ukuthi bagcine bebuyele esikoleni. Abangu-34 kubo bakwazile ukuqeda u-Grade 12 wabo. Kuleli qophelo, mphakathi, ngifisa ukuphinda futhi ngihlabe ikhwelo ngilibhekise kubazali ukuthi baqhubeke nokuxoxisana nezingane zabo ngokubaluleka kokuziphatha kahle ukuze kugwemeke ukukhululewa kwezingane ezikoleni,” kusho Mnu. Dlungwana.